အင်တာနက် က ပေါက်ကြား လာတဲ့ လင်းနို့တွေကို ကိုင်တွယ်နေတဲ့ ဝူဟန် ဓာတ်ခွဲခန်းက ပုံတွေပါ. – Let Pan Daily
အင်တာနက် က ပေါက်ကြား လာတဲ့ လင်းနို့တွေကို ကိုင်တွယ်နေတဲ့ ဝူဟန် ဓာတ်ခွဲခန်းက ပုံတွေပါ.
ဝူဟန် ဓာတ်ခွဲခန်းမှ ပညာရှင်များ လက်အိတ်နဲ့ အကာအကွယ် စသည်တို့ မပါဘဲ လင်းနို့တွေကို လက်ချည်းသက်သက် ကိုင်တွယ်နေ တဲ့ ဓာတ်ပုံများ မကြာသေးမီက လူမှုကွန်ရက်မှာ ပေါ်ထွက်လာခဲ့တဲ့အတွက် ကမ္ဘာကြီးအနေနဲ့ အလွန်ဒေါသထွက်ဖွယ် ဖြစ်နေပါတယ်။ တရုတ်အာဏာပိုင်တွေဟာ ကိုဗစ်ဗိုင်းရပ်စ်ကို သူတို့ ဆီက စတယ် ဆိုတာ ငြင်းဆန်နေဆဲဖြစ်ပြီး-
ကမ္ဘာ့ ပညာရှင်အသိုင်းအဝိုင်းကတော့ တရုတ်တို့ အနေနဲ့ ကိုဗစ်အကြောင်း သတင်းတွေ ကို ရည်ရွယ်ချက် ရှိရှိ ထိမ်ချန်ထား ခဲ့တဲ့အပြင်၊ ဗိုင်းရပ်စ်ရဲ့ DNA ကို သိပြီးသားဖြစ်ပါလျှက် ယနေ့အချိန်အထိ ရေငုံနှုတ်ပိတ်နေတာကို အလွန်ခံပြင်းနေကြပါတယ်။ အခုလည်း ဒီဓာတ်ပုံတွေဟာ ဝူဟန်မြို့မှာ တည်ရှိတဲ့ Institute of Virology မှ ပညာရှင်များ ဖြစ်ပါတယ်။
သူတို့တစ်တွေဟာ လင်းနို့တွေကို ရှာဖွေနေ တဲ့ မှတ်တမ်း ဓာတ်ပုံတွေ၊ လင်းနို့တွေကို လက်ဗလာသက်သက်နဲ့ ကိုင်တွယ်နေတဲ့ဓာတ်ပုံတွေဖြစ်ပြီး၊ Institute of Virology ရဲ့တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုဒ်မှာ နှစ်တော်တော်ကြာကတည်းက ရှိနေပြီးသား ဖြစ်ပါလျှက်၊ မကြာသေးခင်ကမှ အဲဒီဓာတ်ပုံတွေကို ဝက်ဘ်ဆိုက်ဒ်ကနေ ဖျက်ချ ပစ်လိုက်တာဟာ တော်တော် အငြင်းပွားစရာ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီလင်းနို့တွေဟာ SARS နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်တွေ စတင်ပျံ့နှံ့ရာ လင်းနို့တွေဖြစ်ကြပြီး၊ ဒီမှတ်တမ်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ဓာတ်ပုံတွေကို ၎င်းတို့ဆိုက်ဒ်မှာ တင်ထားခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အလားတူပဲ ချက်ချင်းဆိုသလို ဖျက်ပစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီဓာတ်ပုံတွေနဲ့အတူ (၂၀၁၈)ခုနှစ်က ဘေဂျင်းမြို့ အမေရိကန် သံရုံးက ပြုလုပ်တဲ့ Rick Switzer ရဲ့ ဟောပြောပွဲမှတ်တမ်း ရည်ညွှန်းတွေကိုလည်း ဖျက်သိမ်းခဲ့ပါတယ်။
ဒီဖြစ်ရပ်တွေ မတိုင်မီမှာ အမေရိကန် သမ္မတထရမ့်က ကိုဗစ်-၁၉ဟာ တရုတ်ကနေ စတင်ခဲ့တယ်ဆိုတာကို ခိုင်လုံတဲ့ အထောက်အထားတွေ တွေ့ရှိထားပြီဖြစ်ကြောင်းဆိုပါတယ်။ အဲဒီနောက် မေလ(၁)ရက် သောကြာနေ့မှာ ဝူဟန်ဓာတ်ခွဲခန်းက လျှို့ဝှက်ထားအပ်တဲ့ စာရွက်စာတမ်းတွေ ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ ယင်းစာရွက်စာတမ်းများအရ တရုတ်တို့ဟာ ကိုဗစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ သက်သေအထောက်အထားတွေကို ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့ ဖောက်ဖျက်နေကြောင်း ပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါတယ်။ ပညာရှင်တစ်ဦးက အခုမှ ပွဲကြီးပွဲကောင်းလို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။
အငျတာနကျ က ပေါကျကွား လာတဲ့ လငျးနို့တှကေို ကိုငျတှယျနတေဲ့ ဝူဟနျ ဓာတျခှဲခနျးက ပုံတှပေါ.
ဝူဟနျ ဓာတျခှဲခနျးမှ ပညာရှငျမြား လကျအိတျနဲ့ အကာအကှယျ စသညျတို့ မပါဘဲ လငျးနို့တှကေို လကျခညျြးသကျသကျ ကိုငျတှယျနေ တဲ့ ဓာတျပုံမြား မကွာသေးမီက လူမှုကှနျရကျမှာ ပျေါထှကျလာခဲ့တဲ့အတှကျ ကမ်ဘာကွီးအနနေဲ့ အလှနျဒေါသထှကျဖှယျ ဖွဈနပေါတယျ။ တရုတျအာဏာပိုငျတှဟော ကိုဗဈဗိုငျးရပျဈကို သူတို့ ဆီက စတယျ ဆိုတာ ငွငျးဆနျနဆေဲဖွဈပွီး-
ကမ်ဘာ့ ပညာရှငျအသိုငျးအဝိုငျးကတော့ တရုတျတို့ အနနေဲ့ ကိုဗဈအကွောငျး သတငျးတှေ ကို ရညျရှယျခကျြ ရှိရှိ ထိမျခနျြထား ခဲ့တဲ့အပွငျ၊ ဗိုငျးရပျဈရဲ့ DNA ကို သိပွီးသားဖွဈပါလြှကျ ယနအေ့ခြိနျအထိ ရငေုံနှုတျပိတျနတောကို အလှနျခံပွငျးနကွေပါတယျ။ အခုလညျး ဒီဓာတျပုံတှဟော ဝူဟနျမွို့မှာ တညျရှိတဲ့ Institute of Virology မှ ပညာရှငျမြား ဖွဈပါတယျ။
သူတို့တဈတှဟော လငျးနို့တှကေို ရှာဖှနေေ တဲ့ မှတျတမျး ဓာတျပုံတှေ၊ လငျးနို့တှကေို လကျဗလာသကျသကျနဲ့ ကိုငျတှယျနတေဲ့ဓာတျပုံတှဖွေဈပွီး၊ Institute of Virology ရဲ့တရားဝငျဝကျဘျဆိုဒျမှာ နှဈတျောတျောကွာကတညျးက ရှိနပွေီးသား ဖွဈပါလြှကျ၊ မကွာသေးခငျကမှ အဲဒီဓာတျပုံတှကေို ဝကျဘျဆိုကျဒျကနေ ဖကျြခြ ပဈလိုကျတာဟာ တျောတျော အငွငျးပှားစရာ ဖွဈခဲ့ပါတယျ။
အဲဒီလငျးနို့တှဟော SARS နဲ့ ပတျသကျတဲ့ ဗိုငျးရပျဈတှေ စတငျပြံ့နှံ့ရာ လငျးနို့တှဖွေဈကွပွီး၊ ဒီမှတျတမျးနဲ့ပတျသကျတဲ့ ဓာတျပုံတှကေို ၎င်းငျးတို့ဆိုကျဒျမှာ တငျထားခဲ့ပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ အလားတူပဲ ခကျြခငျြးဆိုသလို ဖကျြပဈခဲ့ပါတယျ။ ဒီဓာတျပုံတှနေဲ့အတူ (၂၀၁၈)ခုနှဈက ဘဂေငျြးမွို့ အမရေိကနျ သံရုံးက ပွုလုပျတဲ့ Rick Switzer ရဲ့ ဟောပွောပှဲမှတျတမျး ရညျညှနျးတှကေိုလညျး ဖကျြသိမျးခဲ့ပါတယျ။
ဒီဖွဈရပျတှေ မတိုငျမီမှာ အမရေိကနျ သမ်မတထရမျ့က ကိုဗဈ-၁၉ဟာ တရုတျကနေ စတငျခဲ့တယျဆိုတာကို ခိုငျလုံတဲ့ အထောကျအထားတှေ တှရှေိ့ထားပွီဖွဈကွောငျးဆိုပါတယျ။ အဲဒီနောကျ မလေ(၁)ရကျ သောကွာနမှေ့ာ ဝူဟနျဓာတျခှဲခနျးက လြှို့ဝှကျထားအပျတဲ့ စာရှကျစာတမျးတှေ ထှကျပျေါလာခဲ့ပါတယျ။ ယငျးစာရှကျစာတမျးမြားအရ တရုတျတို့ဟာ ကိုဗဈနဲ့ပတျသကျတဲ့ သကျသအေထောကျအထားတှကေို ရညျရှယျခကျြရှိရှိနဲ့ ဖောကျဖကျြနကွေောငျး ပျေါပေါကျခဲ့ပါတယျ။ ပညာရှငျတဈဦးက အခုမှ ပှဲကွီးပှဲကောငျးလို့ ပွောခဲ့ပါတယျ။
လူနာသစ် မတွေ့တော့တဲ့ ဩစတေးလျ ကိုဗစ် ပြန်ခေါင်းထောင်လာခြင်း နှင့် သင်ခန်းစာ ယူတတ်ရမယ့် မြန်မာပြည်